अन्जु शेर्पाले पहिरिइन् 'मिसेस् मंगोल नेपाल २०२१' को ताज, फस्ट र सेकेन्ड रनर अप कसलाई ? Canada Nepal
अन्जु शेर्पाले पहिरिइन् 'मिसेस् मंगोल नेपाल २०२१' को ताज, फस्ट र सेकेन्ड रनर अप कसलाई ?
काठमाडौं - 'मिसेस् मंगोल नेपाल २०२१' को ताज अन्जु शेर्पाले पहिरिएकी छिन् । उनले अन्तिमका ४ प्रतिस्पर्धीलाई पछाडी पार्दै 'मिसेस् मंगोल नेपाल २०२१' को ताज जितेकी हुन् । 'मिसेस् मंगोल' जितेकी अन्जुले विभिन्न उपहार पनि पाएकी छिन् ।
यस्तै प्रतियोगितामा हिरा शेर्पा फस्ट रनर अप भएकी छिन् भने निशा थापा मगर सेकेन्ड रनर अप भएकी छिन् । यस्तै शोभा मगर थर्ड रनर अप भएकी छिन् । उनीहरु सबैले विभिन्न उपहार पाएका छन् ।
यस कार्यक्रमको आयोजक अमेजन इन्टरटेन्मेन्ट रहेको थियो । कार्यक्रममा निर्णायकमा डा। रेखा थापा, मिसेस् हिमालयन नेपाल माया लामा, ब्युटिसियन नेपाल हेमा पुन मगर र मिसेस् आइकन नेपाल सोनिया ज्याखो रहेका थिए ।
श्रावण ७, २०७८ बिहिवार १२:३८:२० बजे : प्रकाशित
# मिसेस् मंगोल नेपाल २०२१